Artspace - McKnight Foundation
Sababtoo ah cadaadiska horumarka ee miyiga iyo magaalooyinka, farshaxanada iyo shirkadaha hal-abuurka leh waxay ku dhibtoonayaan inay helaan goobo nololeed oo ammaan ah, oo la awoodi karo iyo istuudyo. Artspace waxay ka faa'iidaysataa khibradeeda horumarinta hantida maguurtada si ay u taageerto fanaaniinta. 30kii sano ee la soo dhaafay, waxay samaysay in ka badan 50 guri oo la isku daray, iyadoo siisay guryo in ka badan 1,500 fanaaniin ah iyo qoysaskooda iyo goobo shaqo oo loogu talagalay 600 ganacsi ganacsi.
$2 milyan 10 sano oo amaah ah 0.75%; asalkiisu yahay 2020
Dhisidda deeqahayada meel-samaynta hal-abuurka ah, maalgashiga barnaamijka McKnight ee la xidhiidha wuxuu buuxiyaa raasumaalka shaqada gudaha ee dhuumaha 8-10 mashruuc tobanka sano ee soo socda ee Minnesota, Arizona, Colorado, New York, iyo Maryland. Waxaan filaynaa in deyntan dulsaarka hoose ay ka caawin doonto Artspace kor u qaadista iyo amaahda wadarta $139 milyan ee raasamaalka horumarinta si loo shido in ka badan 1 milyan cagood oo laba jibbaaran oo meel cusub ah. Shaqada horu marinta ee maskaxda leh ee Artspace waxay ujeedadeedu tahay in lagu kasbado taageerada beesha iyo degmada qoto dheer.
Amaahda McKnight waxay sidoo kale taageeri doontaa mashaariicda Minnesota sida Xarunta Hennepin ee Farshaxanka, taas oo ku dadaalaysa in ay hubiso fursadaha bulshooyinka laga tirada badan yahay ee aan dhaqan ahaan helin inta badan goobaha lagu noolaado ama studios fanaaniinta.
Goor hore in la sheego
Waa goor hore in la soo sheego. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijkan maalgashiga la xiriira (PRI) wuxuu qayb ka yahay sahaminta joogtada ah ee McKnight ee dhaqaallaha kale iyo adeegsiga hal -abuurka raasumaalka si ay uga faa'iidaystaan fannaaniinta. Waxaan rajaynaynaa in maalgashigu bixin doono barashada xeeladaha cusub ee McKnight isgoyska hoggaanka farshaxanka hal -abuurka ah iyo bulshooyinka sinnaanta leh.
Sawirka Sawirka: Farshaxanka: Farshaxanka Waqooyiga Warehouse Lofts in Saint Paul, MN.
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay 10/2021